Los Angeles မြို့ကလေးများပြတိုက်
အများစုမှာအဓိက Los Angeles မြို့ပြတိုက် ကလေးတွေများအတွက်အစီအစဉ်များရှိသည်။ ဤစာရင်းတွင်အပေါ်သားသမီးရဲ့ပြတိုက်ဖြစ်စေအထူးသဖြင့်ကလေးတွေအတွက်ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားတာ, ဒါမှမဟုတ်ကလေးတွေရည်ရွယ်ခြွင်းချက်ပြပွဲရှိနေကြသည်။ အထူးသသားသမီးတို့အဘို့ဖန်တီးသောသူတို့သညျအများအားဖြင့်မိသားစုပွဲတော်များအားလုံးအသက်အရွယ်အဘို့ဖြစ်ကြ၏ပေမယ့်မိသားစုအစီအစဉ်များနှင့်အတူပုံမှန်ပြတိုက်, ကလေးတွေ5နှင့်တက်ဘို့အများအားဖြင့်များမှာ 8. ကလေးတွေကို0င်ရည်ရွယ်နေကြသည်။
Zimmer ကလေးများပြတိုက်။ Zimmer ကလေးများပြတိုက်၏ဓာတ်ပုံယဉျကြေး
ပေါ် Zimmer ကလေးများပြတိုက် ဟာအံ့ဖွယ်အမိုင်အပေါ်ပြတိုက် Row Los Angeles မြို့များ၏စီးတီးအတွက်သာဆက်ကပ်အပ်နှံသားသမီးရဲ့ပြတိုက်ပါပဲ။ ဒါဟာလက်ပေါ်မှာတပ်ဆင်ထားကြီးမားသောအကြံဥာဏ်များသင်ပေးဖို့ Los Angeles မြို့များ၏အထင်ကရအဆောက်အနှင့်မတူကွဲပြားမှုကိုအသုံးပြုကလေးများ 0-8 များအတွက်ပြပွဲ။ အချိန်ကာလသတ်မှတ်ဂီတ, ပုံပြင်နဲ့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုများနေ့စဉ်လည်းရှိပါတယ်။
Pasadena အတွက် Kidspace ပြတိုက်
Kidspace ကလေးများပြတိုက်မှာ Galvin ရူပဗေဒသစ်တော။ Kidspace ဓာတ်ပုံယဉျကြေး
Pasadena အတွက် Kidspace ပြတိုက်စေ့စပ်ပင်ဆိုသည့်အကလေးတွေကိုစောင့်ရှောက်ရန်မိုးလုံလေလုံနှင့်ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများတစ်ခုကြွယ်ဝသောစည်းစိမ်နှင့်အတူ, အခြားအကြီးအကလေးတွေရဲ့ပြတိုက်ပါပဲ။ တောင်တက်ခြင်း, ရှာဖွေစူးစမ်းဆန်းစစ်, တူးနှင့်အဆောက်အဦနာရီ0မှ 8 အလုပ်များလေးတွေထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။
Irvine, CA. အတွက်စီးတီးကလေးများပြတိုက်ဟန်ဆောင် ဟန်ဆောင်စီးတီး၏ဓာတ်ပုံယဉျကြေး
Irvine အတွက်စီးတီးစူပါမားကက်ကနေရဲစခန်းနှင့်ဆေးရုံတစ်မြို့လုံးရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကိုယ်စားပြုကစားဒေသများနှင့်အတူငယ်လေးတစ်မြို့ကဲ့သို့အတက်သတ်မှတ်ဟန်ဆောင်။ ကလေးများတက်ဝတ်စားဆင်ယင်ခြင်းနှင့်သူတို့နှစ်သက်သောအဖြစ်အများအပြားအခန်းကဏ္ဍအဖြစ်ပေါ်ယူနိုင်ပါတယ်။
ကယ်လီဖိုးနီးယားသိပ္ပံ Center က
ကယ်လီဖိုးနီးယားသိပ္ပံ Center က။ ကယ်လီဖိုးနီးယားသိပ္ပံစင်တာ Courtesy
အတွင်းကယ်လီဖိုးနီးယားသိပ္ပံစင်တာတွင် Exposition ပန်းခြံ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ခြွင်းချက်လက်ပေါ်မှာငယ်ရွယ်ပရိတ်သတ်များအတွက်သိပ္ပံသဘောတရားများကိုဘာသာပြန်ဆိုကြောင်းသက်သေခံပစ္စည်းများကိုမသာ, တက်ကလေးတွေ5နှင့်အဘို့အ LA ကမှာထိပ်တန်းပြတိုက်ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်လည်းကြီးမားနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်င်လို့ပဲ။ ကယ်လီဖိုးနီးယားသိပ္ပံ Center ကအာကာသလွန်းပျံယာဉ်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုမှအိမ်ပြန်ဖြစ်တယ်, ထို့အပြင်ပြပွဲနှင့်ပတ်သက်သောရုပ်ရှင်ကားပြသတဲ့ IMAX ပြဇာတ်ရုံရှိပါတယ်။ အဆိုပါကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများနှင့် IMAX တစ်ဦးဝန်ခံချက်တာဝန်ခံရှိသည်။
Los Angeles မြို့ကောင်တီ၏သဘာဝသမိုင်းပြတိုက်
Los Angeles မြို့ကောင်တီ၏သဘာဝသမိုင်းပြတိုက်မှာဒိုင်နိုဆောခန်းမ။ About.com မှလိုင်စင်ဓာတ်ပုံ© 2011 ခုနှစ် Kayte Deioma,
ဒိုင်နိုဆော။ Big သူတွေကို။ ငါကပိုလို့ပြောလိုအပ်ပါသလား? ကောင်းပြီသတ္တုဓာတ်, ကျပ်နို့တိုက်သတ္တဝါများနှင့်ကယ်လီဖိုးနီးယားသမိုင်းကနေလက်ပေါ်တူးဖော်ရေးသည် LA ကဧရိယာ၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှတိရိစ္ဆာန်များနှင့်အင်းဆက်ပိုးမွှားများနှင့်ပြုလုပ်၏ကိုယ်ပိုင်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်နဲ့ကြောက်မက်ဘွယ်ဥယျာဉ်တော်မှ, ပဒေသာကပိုရှိပါတယ်။ ရာသီအလိုက်လိပ်ပြာနှင့်အင်းဆက်ပိုးမွှားပြပွဲနှင့်ပွဲတော်များဘေးမှာ Exposition Park မှာကယ်လီဖိုးနီးယားသိပ္ပံဗဟိုဌာနဖြစ်သောသဘာဝသမိုင်းပြတိုက်, ပြန်သွားဖို့အကြောင်းပြချက်အများကြီးပေး။
အဆိုပါ Skirball Center မှာနောဧရဲ့သေတ္တာ။ Kayte Deioma
အင်ဂျင်နီယာများ၏အံ့သြဖွယ်လုပ်ရပ်ဖြစ်ခြင်းများအပြင်၌, Skirball ယဉ်ကျေးမှုစင်တာမှာနောဧရဲ့သေတ္တာပြပွဲအားလုံးအသက်အရွယ်မရွေးလေးတွေပတ်ပတ်လည်ကိုတက်များနှင့်တဆင့်တွားဖို့အတှကျပဲလွင်ပြင်ပျော်စရာပါပဲ။
ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု Cube Orange County
Discovery Cube Orange County မှာဘိုးရင်းဒုံးပျံ Lab က။ ယင်းရှာဖွေတွေ့ရှိသိပ္ပံဖောင်ဒေးရှင်း၏ဓာတ်ပုံ Courtesy
ခေါင်မိုးပေါ်တွင်ဧရာမတုံးနှင့်အတူ Discovery Cube, အ Discovery သိပ္ပံဖောင်ဒေးရှင်းက operated ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကလေးတွေသိပ္ပံနည်းကျအယူအဆတစ်ခုနားလည်မှုပေးဖို့ဒီဇိုင်း 100 ကျော်အပြန်အလှန်သိပ္ပံပြပွဲရှိပါတယ်။
ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု Cube Los Angeles မြို့
Discovery Cube Los Angeles မြို့မှာ the Recycle ပြကွက်။ ယင်းရှာဖွေတွေ့ရှိသိပ္ပံဖောင်ဒေးရှင်း၏ဓာတ်ပုံ Courtesy
2014 ခုနှစ်တွင်အဆိုပါ Discovery သိပ္ပံဖောင်ဒေးရှင်း LA ကအလွန်မြောက်ဘက်မှာစန်းဖာနန်ဒိုချိုင့်ထဲမှာ Los Angeles မြို့ကျောင်းဝင်းဖွင့်လှစ်။ အဆိုပါ Discovery Cube LA က Space ကို, ဘူမိဗေဒ, ရေနှင့်ပါဝါ, သန့်နှင့်အခြားသောအကြားဟော်ကီ၏သိပ္ပံအပေါ်အနုပညာပြပွဲ၏ပြည်နယ်ရှိပါတယ်။
Bower Kidseum ။ Kayte Deioma
Bower Kidseum ဆင်း Santa Ana အတွက်အဓိက Bower ပြတိုက်ကနေပိတ်ပင်တားဆီးမှု, အထူးသဖြင့်ကလေးတွေနှင့်အပြန်အလှန်အစီအစဉ်များကိုစာရေးဘို့ဒီဇိုင်းယာယီယဉ်ကျေးမှုပြပွဲရှိပါတယ်။ အဓိကပြတိုက်ကိုလည်းတစ်လ၏ပထမတနင်္ဂနွေပြင်ပယဉ်ကျေးမှုမိသားစုပွဲတော်များရှိပါတယ်။
ကလေးတွေအဘို့အ SoCal ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုခမ်းနားပြတိုက်ဖြစ်လာဖို့လမ်းတွင်, တောင်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားကလေးများပြတိုက် Pasadena အတွက်ယာယီအိမ်ကတွေ့ရှိပြီးပျော်စရာအဘို့အဖွင့်ထားသည်။
la Habra ကလေးများပြတိုက်
တစ်ဦး Pre-ကျောင်းမှာကစားပန်းခြံရှိတယ် 7. ဖို့ဖြစ်ကောင်းအဖြစ်တစ်နည်းနည်းပင်ပန်းလျှင်,, La Habra ကလေးများပြတိုက်တစ်ခုပျော်စရာကမ်းလှမ်းပိုအလယ်ပိုင်းသားသမီးရဲ့ပြတိုက်အဖြစ်ဧည့်သည်များမှစိတ်ဝင်စားဖို့2ကနေကလေးတွေအတွက်အကောင်းဆုံးတော်ပါတယ်သားသမီးရဲ့ပြပွဲ၏ရွေးချယ်ရေးနေကြသည်မဟုတ် တော်တော်များများရထား-related ပြပွဲ
အနုပညာမိသားစုအစီအစဉ်များ၏ LA ကကောင်တီပြတိုက်
အနုပညာရဲ့ Los Angeles မြို့ကောင်တီပြတိုက်တစ်ခုခရီးစဉ်အပေါ်လေးတွေ။ About.com မှလိုင်စင်ဓာတ်ပုံ© 2007 ခုနှစ် Kayte Deioma,
အနုပညာများ၏ Los Angeles မြို့ကောင်တီပြတိုက်ကလေးတွေနှင့်မိသားစုများအတွက်အစီအစဉ်များအမျိုးမျိုးကမ်းလှမ်း။ NextGen အစီအစဉ်အတွက်အဆိုပါဝိဇ္ဇာအခမဲ့ပြတိုက်အဖွဲ့ဝင်များနှင့်ဝန်ခံချက်မည်သူမဆို 17 နှင့်အောက်, တဦးတည်းပူးတွဲအရွယ်ရောက်ပြီးသူဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ Hammer အဆောက်အအုံအတွက် Boon ကလေးများပြခန်းအတူတကွအနုပညာမြင်စေမိသားစုများအခွင့်အလမ်းများကိုပေးထားပါတယ်။ အခမဲ့မိသားစုတနင်္ဂနွေအဘို့မိမိတို့ပြက္ခဒိန်စစ်ဆေးပါ။
အဆိုပါသည် Getty Center မှာမိသားစုပွဲတော်။ Kayte Deioma
အဆိုပါသည် Getty Center ကသင်တို့ကိုလည်းလေ့လာသင်ယူနှင့်အနုပညာ-related ပြပွဲ၏နံပါတ်အားဖြင့်သင်တို့၏လေးတွေနှင့်အတူဆော့ကစားနိုင်မည့်အထူးမိသားစုအခန်းတစ်ခန်းရှိပါတယ်။ သူတို့ကအစနွေရာသီ, ဥယျာဉ်တော်ဖျော်ဖြေပွဲနှင့်မိသားစုပွဲတော်များတစ်လျှောက်လုံးလေးတွေအတှကျဇယားအနုပညာလှုပ်ရှားမှုများကိုဆက်ကပ်။
ကလေးတွေကအဘို့အ quick ယဉ်ကျေးမှု Tours မှ
LACMA ၏လျင်မြန်စွာယဉ်ကျေးမှုအနုပညာခရီးစဉ်။ About.com မှလိုင်စင်ဓာတ်ပုံ© 2007 ခုနှစ် Kayte Deioma,
LA မြို့ရဲ့အဓိကအနုပညာပြတိုက်မှာစီစဉ်ထားအစီအစဉ်များအပြင်, လျင်မြန်စွာယဉ်ကျေးမှု Tours မှ LACMA နှင့် Getty စင်တာကလေးတွေသာခရီးစဉ်ပါဝငျပေးထားပါတယ်။
က Standard မှာခေါင်မိုးပေါ်ဘား
Beverly Hills မှာလှည့်လည်: Do မှအရာများနှင့်မျက်မှောက်တွင်ကြည့်ပါရန်
တစ်စမတ်က Universal Studios ကဟောလိဝုဒ်ဧည့်သည် Be
Los Angeles မှာ Songkran ထိုင်းနှစ်သစ်ကူးဆင်နွှဲ
2018 ခုနှစ်တွင် Montauk အတွက်9အကောင်းဆုံးဟိုတယ်
Hampton လမ်းများဂေးမာနသည် 2016 --Norfolk ဂေးမာနသည် 2016
အောက်မှာ $ 10 ကိပ်တောင်းထဲမှာလုပ်ပါဖို့အကောင်းဆုံးအရာ 10
Clonfert ၏စိန့် Brendan - ထို Navigator
ဒပ်ဘလင်ရဲ့ M50 Orbital ကားလမ်းပေါ်တွင်လမ်းသုံးခများငွေပေးချေရန်ကဘယ်လို
မေရီလန်းပြည်နယ်များတွင် Homestead အခွန်ခရက်ဒစ်
ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာရှိတဲ့စိမ်းလန်း 2017 အပေါ်မျက်နှာပြင်
ရုရှားမီတာတက္ကစီမှတစ်ဦးကလမ်းညွှန်: ရုရှားနိုင်ငံတွင်တစ် Cab Get လုပ်နည်း